Wiil Soomaali ah oo iska dhigay gabar oo lagu xirey Turkiga Faahfaahina ka soo baxayso - Awdinle Online
Wiil Soomaali ah oo iska dhigay gabar oo lagu xirey Turkiga Faahfaahina ka soo baxayso
February 15, 2020 (Awdinle Online) –Wararka ka imanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay baaritaan ku hayaan wiil Soomaali ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Ankara kadib markii uu soo xirtey dharka dumarka.
Wiilkan Soomaaliga ah oo la yiraahdo Ibraahin Maxamed ayaa la qabtay isagoo ku safraya dukumintii ay leedahay gabar Soomaali ah oo muuqaal ahaan isku ekeeysiiyay.
Sidoo kale Booliska ayaa qabtay gabadha lahayd baasboorka oo magaceeda lagu sheegay Khadiijo iyadoo dooneysay inay ka baxdo garoonka diyaaradaha magaalada Ankara.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waddo walba u mara inay ku galaan dalalka Yurub iyagoo qaarkood mara badaha halka kuwo kalana ay isku dayaan inay ku dhoofaan dukumintiyo been abuur ah.
Previous articleEU announces €5.17 million support to education in Somalia
Next articleTurkiga oo lagu eedeeyay in uu Taageero siiyo Xagjirinta ku dagalama Syria, Libya iyo. Somalia